CO₂ Laser nokuti Fashion uye Clothing Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
CO₂ Laser nokuti Fashion uye Clothing Industry
CO₂ Laser zvokufuka
Golden Laser constructs CO₂ Laser michina nokuda kwokuparadza kuroora Dzinogara, mutsetse uye plaid akamendwa machira akadhindwa uye kunyanya kuti tsika aita chete kuti masutu.
High vakarongeka MTM (akaita-to-chiyero) pamwe akangwara Laser okurwadzisa hurongwa.
Mission: vakarongeka / Material pakuponesa / Labor rokuponesa / Zero Inventory / Intelligent
Laser Cutting uye achiita zvokutemera mu Clothing Industry
With kukura vakawanda Textiles, fashoni nenguvo indasitiri iri kukura nokukurumidza. Uye kuva yakakodzera kuti maindasitiri pezvakaitwa akadai cheka uye achiita zvokutemera. Chakaita zvokugadzirwa uyewo dzinongoitika zvinhu zvino kazhinji kucheka uye yakanyorwa Laser enyika . Kubva dzakarukwa akamendwa pajira riya akamendwa Micheka kwakavharwa nenyama, machira kusona kune nonwovens uye felts, anenge marudzi ose micheka inogona Laser kupatsanurwa.
Traditional kusona VS. Laser Cutting
Munguva kwakajairika kusona, Chinyorwa nokuveza ndiyo inonyanya kushandiswa, zvichiteverwa zvokuimba okurwadzisa. Zvose izvi kubudiswa nzira anechekuita mukuru mavhoriyumu nokuveza basa, uye vakatema kururama hakusi kumusoro. Laser nokuveza muchina zvakakodzera diki mavhoriyumu, multi-siyana nguo kusona, kunyanya nokuti kutsanya fashoni uye tsika zvipfeko.
Traditional Chinyorwa nokuveza ane refu vaida pamusoro muenzaniso aricheke uye cheek pashure achicheka. Laser nokuveza ane refu kusachinja-chinja uye zvaitika mucheto chisimbiso.
Uyezve, isu zvinopa CAD design, AUTO Marker, otomatiki grading, otomatiki Photo digitizer Software pamwe Laser kuzvicheka kuzadzisa zvoga kugadzira.
Sei sarudza Laser kuti tsika zvipfeko?
Golden Laser constructs Laser mhinduro kubva munhu zvichienderana customization mapfekero uye zvipfeko indasitiri.
Zvichienzaniswa chokushandisa nokuveza, kuti Laser nokuveza ane zvakanakira mukuru nemazvo, zvishoma consumables, akachena akavezwa micheto, uye zvaitika nechisimbiso kumicheto.
Automatic nesting, otomatiki zvokudya uye chinoramba Laser nokuveza, inowirirana vakawanda kugadzirwa uye zvakabudiswa, rinoponesa pabasa Chinyorwa pakuparadzira uye muenzaniso kugadzira.
Shandisa nyanzvi nesting Software kuwedzera zvinhu Utilisation kubudikidza dzinenge 7%. The razero kure pakati mifananidzo inogona co-mucheto vakatongoparadzwa.
Professional yekombiyuta, nyore kuwana muenzaniso pamasikiro, zvechinguvana kugadzira, Photo digitizer uye grading. Pattern date zviri nyore kushandisa mu PC.
Makomba (perforating), rinoparadza, hollowing, achiita zvokutemera, obtuse pamakona achicheka, Ultra-refu Manyorerwo kubudiswa, Laser michina anogona kugadzirisa chero mashoko zvakakwana.
Tiri vakazvipira kubatsira iwe kuumba kunatsurudza kugadzirwa wako nyore uye nani dzedu dzakasiyana Laser enyika.
Our CO 2lasers vari rakanakira achicheka uye runyoro zvakawanda machira uye Textiles.
With Golden Laser kuti CO 2Laser michina kuti fashoni uye zvipfeko maindasitiri, chimwe-Dzinogara micheka zvinogona Laser kuchekwa kutsanya uye basa, uyewo akanyorwa uye Perforated achirera vagokungurusa kumonera. Naizvozvo iwe vanoburitsa pundutso pamwe Laser pane nebanga.
Shandisa Golden Laser kuti CO 2 Laser michina, kuva mutungamiri musika wako.
CO 2flatbed Laser nokuveza Machine pamwe conveyor
Galvo Laser rwakapetwa kumonera nokuveza uye achiita zvokutemera Machine
CO 2 Laser aricheke nokuda plaids uye rinoparadza jira
Vision Laser aricheke kuti jira yakadhindwa
Laser anofa nokuveza muchini tichifungisisa chinamirwa
Imhandoi rejira zvakakodzera CO2 Laser kugadzira?
Polyester, wodna, Kevlar, Fleece, Cotton, Polypropylene, Polyurethane, Washington City Offices, spacer akamendwa Felt, Silk, Filter nemvere, zvekushandisa Textiles, chakaita zvokugadzirwa Textiles, Foam, Fleece, Velcro zvinhu, dzakarukwa akamendwa pajira riya akamendwa Dete, Polyamide, etc .
Tinoratidza zvinotevera Laser michina
kuti fashoni uye zvipfeko indasitiri
Golden Laser kwakaita CO2 Laser michina vari rakanakira kucheka achiita zvokutemera Textiles pamwe zvakarurama uye kuchinja mukurima.
High nokukurumidza Laser nokuveza nguvo jira pamwe conveyor uye car-feeder. Double Y-akabatana mamiriro. 80 watts or ~ 150 watts or
Galvo Laser Kucheka uye Perforating Machine
A-chinja Laser gadzirirwa kuti uite zvose nokuveza uye perforating nokuda Jerseys, polyester, microfiber, kunyange jira Stretch.
Laser Cutter pamwe Camera
Kuramba kudyisa, car-pamutemo uye Laser kucheka micheka akadhindwa uye nenguvo zvisiri. Scan nzvimbo 1500mm × 900mm